Programan'ny 10 Nights
Ity andro manaraka ny sakafo maraina Andramo ka alaivo i Chnadigarh. Rehefa tonga tao Chandigarh famindrana mba hijery ny. Ny alina ao Chandigarh.
Androany aorian'ny fandriam-bahiny, mialà amin'ny hotely ary mandehana mankany amin'ny fitsidihan'i Chandigarh. Tsidiho ny Rock Garden. Ny fidirana tsy misy fitenin-dry zareo dia mitarika amin'ny fikarakarana vato, vatolampy, tapa-damba, tsy misy mahasolotena, tsy misy saro-piaro, vato, kapoaka, tapa-pandrefesana, saribakoly, fiainam-pianakaviana, vehivavy ary tempoly. Tafaverina any amin'ny seranam-piaramanidina fiantsonan'ny seranam-piaramanidina Chandigarh any amin'ny faritry ny seranana.
Sokafy ny Popup
Afeno ny Popup